October 2, 2021 – Shwe Myanmar
ဓာတ်မြေဩဇာ များ ဈေးတက်နေ တောင်သူဦးကြီးများအတွက် အထောက်အကူပြု စေရန်အလို့ငှာ စေတနာဖြင့် ကူးယူတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နွားချေး မြေဆွေး မြေသြဇာ ပြုလုပ်နည်း အများအပြား ရှိသည့်အနက် တောင်သူတိုင်းအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မည် နွားခြေးမြေဆွေးပြုလုပ်နည်းအကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ နွားချေး နှင့် အခြားသော သစ်ရွက်ဆွေး ၊ ကောက်ရိုးဆွေးများကို ရေလောင်းရလွယ်ကူပြီး မွှေရလွယ်ကူစေသော အရွယ်အစား ပုံထားပါ။
၂။ ပုံထားသော နွားချေးနှင့် အခြားအရာများမှာ ခြောက်နေပါက ရေလောင်းပြီး အပေါ်အောက်လှန်ပေးပါ။
၃။ ရေလောင်းပြီးပါက ပလပ်စတစ် အမဲ ဖြင့် နှစ်ထပ်သုံးထပ် ဖုံးအုပ်ပေးပါ။
၄။ နှစ်ပတ်ကြာလျှင် ပလပ်စတစ်အားပြန်ခွာပြီး ရေလောင်း၍ အပေါ်အောက်လှန်ကာ ပြန်ဖုံးပေးထားရမည်။ ထိုအချိန်တွင် အပူချိန်အရမ်းမြင့်နိုင်သောကြောင့် သေချာစနစ်တကျလုပ်ဆောင်ရမည်။
၅။ နောက်ထပ် ၂ပတ်ကြာပါက စိုက်ခင်းအတွင်းအသုံးပြုနိုင်သော နွားချေးမြေဆွေးများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တောင်သူကြီးများ အလွယ်တကူနှင့် လျှင်လျှင်မြန်မြန် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါသောကြောင့် လိုအပ်ချက်များ ရှိပါက နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
နောက်အပတ်များမှာလည်း ယခုထက်ပိုကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းများကို
ဓာတျမွဩေဇာ မြား ဈေးတကျနေ တောငျသူဦးကွီးမြားအတှကျ အထောကျအကူပွု စရေနျအလို့ငှာ စတေနာဖွငျ့ ကူးယူတငျခွငျးဖွဈပါတယျ။
နှားခြေး မွဆှေေး မွသွေဇာ ပွုလုပျနညျး အမြားအပွား ရှိသညျ့အနကျ တောငျသူတိုငျးအလှယျတကူပွုလုပျနိုငျမညျ နှားခွေးမွဆှေေးပွုလုပျနညျးအကွောငျးကို ရေးသားဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ နှားခြေး နှငျ့ အခွားသော သဈရှကျဆှေး ၊ ကောကျရိုးဆှေးမြားကို ရလေောငျးရလှယျကူပွီး မှရေလှယျကူစသေော အရှယျအစား ပုံထားပါ။
၂။ ပုံထားသော နှားခြေးနှငျ့ အခွားအရာမြားမှာ ခွောကျနပေါက ရလေောငျးပွီး အပျေါအောကျလှနျပေးပါ။
၃။ ရလေောငျးပွီးပါက ပလပျစတဈ အမဲ ဖွငျ့ နှဈထပျသုံးထပျ ဖုံးအုပျပေးပါ။
၄။ နှဈပတျကွာလြှငျ ပလပျစတဈအားပွနျခှာပွီး ရလေောငျး၍ အပျေါအောကျလှနျကာ ပွနျဖုံးပေးထားရမညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ အပူခြိနျအရမျးမွငျ့နိုငျသောကွောငျ့ သခြောစနဈတကလြုပျဆောငျရမညျ။
၅။ နောကျထပျ ၂ပတျကွာပါက စိုကျခငျးအတှငျးအသုံးပွုနိုငျသော နှားခြေးမွဆှေေးမြားကို ရရှိနိုငျမညျဖွဈပါတယျ။
သို့ဖွဈပါ၍ တောငျသူကွီးမြား အလှယျတကူနှငျ့ လြှငျလြှငျမွနျမွနျ တဈနိုငျတဈပိုငျပွုလုပျနိုငျစရေနျ ရညျရှယျ၍ မြှဝပေေးခွငျးဖွဈပါသောကွောငျ့ လိုအပျခကျြမြား ရှိပါက နားလညျပေးကွပါခငျဗြာ။
နောကျအပတျမြားမှာလညျး ယခုထကျပိုကောငျးမှနျသော နညျးလမျးမြားကို
“၃ မိနဈအိုးတှေ မီး လော ငျ တာ ဒီ အ မှား တှေ ကွောငျ့ပါ”
“မကျြနှာလေးနုပြိုတငျးရငျးနစေဖေို့ Collagen ဓာတျဖွညျ့တငျးပေးတဲ့ သဘာဝပေါငျးတငျနညျး ၃မြိုး”
မျက်နှာလေးနုပျိုတင်းရင်းနေစေဖို့ Collagen ဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့ သဘာဝပေါင်းတင်နည်း ၃မျိုး
Collagen ဆိုတာကတော့ အရေပြားဖွဲ့စည်းမှုမှာ လေးပုံပုံရင် သုံးပုံပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဓာတ်က မျက်နှာအသားအရေကို တင်းရင်းစေပါတယ်။
Collagen ဓာတ်ဟာ အသက်အရွယ်အိုမင်းလာတာနဲ့အမျှ လျော့ကျလာပါတယ်။
Collagen ဓာတ်များပြားစေဖို့ Collagen ပါဝင်တဲ့ ဆေးတွေသောက်လို့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Collagen Supplementတွေ မသောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့
အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာတောင် မျက်နှာလေးနုပျိုတင်းရင်းနေစေဖို့ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ
အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ Mask လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Collagen ဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့ ပေါင်းတင်နည်းတွေကတော့….
၁။ ကြက်ဥသုံးပြီး ပေါင်းတင်နည်း
ကြက်ဥမှာ ပရိုတင်းဓာတ်များစွာပါပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး ညီညာစေပါတယ်။
ပေါင်းတင်ဖို့ ကြက်ဥအကာကို အမြှုပ်ထတဲ့အထိမွှေပေးပါ။
ခြောက်တာနဲ့ ခွာချပြီးရေနဲ့ဆေးချပါ။ ဒီနည်းက ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့ဆဲတွေကို
Collagen ထုတ်နှုန်းကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
မုန်လာဥနီတစ်ဝက် ပြုတ်ထားပါ။ ပြီးတာနဲ့ အတုံးလေးတွေလှီးပါ။
Milk Cream တစ်ဇွန်းထည့်ပါ။မုန်လာဥနီနဲ့ ထောပတ်သီးကို ကြိတ်ပေးပါ။
ထောပတ်သီး လေးပုံပုံရင် တစ်ပုံကို ယူပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းသုံးမျိုးကို ရောလိုက်ပါ။
သင့်မျက်နှာပေါ်ကို ဘရပ်ရ်ှနုနုလေးနဲ့ ဒါမှမဟုတ်လက်နဲ့ လိမ်းလိုက်ပါ။
၁၅ မိနစ်ကနေ နာရီဝက်ထိထားပေးပါ။ ပြီးတာနဲ့ ရေနဲ့ဆေးပါ။
ထောပတ်သီးမှာ ပါတဲ့ဗီတာမင်အီးနဲ့ မုန်လာဥနီမှာပါတဲ့ ဘီတာကယ်ရိုတင်းဓာတ်တွေက Collagen ဓာတ်တိုးပွားစေပါတယ်။
ကီဝီသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီက Collagen ထုတ်လုပ်ရာမှာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ကီဝီသီးနဲ့ ထောပတ်သီးကို ကြိတ်လိုက်ပါ။
ကီဝီသီးတစ်ဝက်နဲ့ ထောပတ်သီး လေးပုံပုံရင် တစ်ပုံကို ရောပါ။
ပြီးတာနဲ့ ဒီအရောကို မျက်နှာပေါ်လိမ်းပါ။
မကျြနှာလေးနုပြိုတငျးရငျးနစေဖေို့ Collagen ဓာတျဖွညျ့တငျးပေးတဲ့ သဘာဝပေါငျးတငျနညျး ၃မြိုး
Collagen ဆိုတာကတော့ အရပွေားဖှဲ့စညျးမှုမှာ လေးပုံပုံရငျ သုံးပုံပါဝငျတဲ့ ပရိုတငျးဓာတျဖွဈပါတယျ။
ဒီဓာတျက မကျြနှာအသားအရကေို တငျးရငျးစပေါတယျ။
Collagen ဓာတျဟာ အသကျအရှယျအိုမငျးလာတာနဲ့အမြှ လြော့ကလြာပါတယျ။
Collagen ဓာတျမြားပွားစဖေို့ Collagen ပါဝငျတဲ့ ဆေးတှသေောကျလို့ရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Collagen Supplementတှေ မသောကျခငျြဘူးဆိုရငျတော့
အသကျကွီးတဲ့အခြိနျမှာတောငျ မကျြနှာလေးနုပြိုတငျးရငျးနစေဖေို့ ကိုယျ့အိမျမှာပဲ
အလှယျတကူရနိုငျတဲ့ပစ်စညျးတှနေဲ့ Mask လုပျနိုငျပါတယျ။
Collagen ဓာတျဖွညျ့တငျးပေးတဲ့ ပေါငျးတငျနညျးတှကေတော့….
၁။ ကွကျဥသုံးပွီး ပေါငျးတငျနညျး
ကွကျဥမှာ ပရိုတငျးဓာတျမြားစှာပါပွီး အသားအရကေို တငျးရငျးစပွေီး ညီညာစပေါတယျ။
ပေါငျးတငျဖို့ ကွကျဥအကာကို အမွှုပျထတဲ့အထိမှပေေးပါ။
ခွောကျတာနဲ့ ခှာခပြွီးရနေဲ့ဆေးခပြါ။ ဒီနညျးက ခြှေးပေါကျကဉျြးစပွေီး ပကျြစီးသှားတဲ့ဆဲတှကေို
Collagen ထုတျနှုနျးကို လှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။
မုနျလာဥနီတဈဝကျ ပွုတျထားပါ။ ပွီးတာနဲ့ အတုံးလေးတှလှေီးပါ။
Milk Cream တဈဇှနျးထညျ့ပါ။မုနျလာဥနီနဲ့ ထောပတျသီးကို ကွိတျပေးပါ။
ထောပတျသီး လေးပုံပုံရငျ တဈပုံကို ယူပါ။ ပါဝငျပစ်စညျးသုံးမြိုးကို ရောလိုကျပါ။
သငျ့မကျြနှာပျေါကို ဘရပျရျှနုနုလေးနဲ့ ဒါမှမဟုတျလကျနဲ့ လိမျးလိုကျပါ။
၁၅ မိနဈကနေ နာရီဝကျထိထားပေးပါ။ ပွီးတာနဲ့ ရနေဲ့ဆေးပါ။
ထောပတျသီးမှာ ပါတဲ့ဗီတာမငျအီးနဲ့ မုနျလာဥနီမှာပါတဲ့ ဘီတာကယျရိုတငျးဓာတျတှကေ Collagen ဓာတျတိုးပှားစပေါတယျ။
၃။ ထောပတျသီးနဲ့ ကီဝီသီး Mask
ကီဝီသီးမှာပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျစီက Collagen ထုတျလုပျရာမှာ အထောကျအကူပွုပါတယျ။
ကီဝီသီးနဲ့ ထောပတျသီးကို ကွိတျလိုကျပါ။
ကီဝီသီးတဈဝကျနဲ့ ထောပတျသီး လေးပုံပုံရငျ တဈပုံကို ရောပါ။
ပွီးတာနဲ့ ဒီအရောကို မကျြနှာပျေါလိမျးပါ။
“ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတို့ရဲ့ ရိုးရာဓလဖွေ့ဈတဲ့ မိဘခွရောယူနညျး”
မိဘခြေရာယူနည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်တဲ့ မိဘခြေရာယူ နည်း
သိတဲ့သူတွေရှိသလို မသ်ိတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် ၊သိတဲ့ သူတွေကလည်း စနစ်တကျ ဘယ်လိုတွေယူ တယ်ဆိုတာ သိသူနည်းပါတယ် ၊ မိဘခြေရာ ဘယ်လို ယူယူ ရတယ်ဆိုပေမယ့် မိဘရော သားသ္မီးရောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းယူတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ၊
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဖတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖူးတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနင့်ကုန်လုံဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ မိဘခြေရာယူနည်းလေးကိုမှတ်မိသလောက်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ မုန်ညှင်းဆီ ၊နှမ်းဆီ၊နနွင်းဆေးသားစွဲထင်စေမြည့်ပိတ်ဖြူစ၊မုန်ညှင်းဆီနှမ်းဆီ နနွင်းသုံးမျိုးကိုရောမွှေပေးပါ
မိဘခြေရာယူမည့်နေ့ ဘယ်နေ့ယူယူ မိဘခြေရာကတော့ရတယ်ဆိုပေမယ် ဆရာတော်ကြီးများကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏နေ့ကြီးနေ့မြတ် ဥပမာသတင်းကျွတ်လပြည့် ၊တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်စသည်)ကိုယ့် မွေးနေ့စသည့်နေ့များတွင်ယူပါက ပိုကောင်းပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ် ၊၊
ယူနည်း ခြေရာမယူမီမိဘ သားသ္မီးရေချိုးသန့်စင်ကာသန့်ရှင်းသောအဝတ်များဝတ်ဆင်ပြီးဘုရားစင်ရှေ့ထိုင်ပါခြေရာမယူမီ ဘုရားစင် ရှေ့တွင် ငါးပါးသီလခံယူပြီးဘုရားရှိခိုးပါ ၊ ပြီးလျှင် မိဘကို မြင့်သောမြတ်သောနေရာ (ထိုင်ခုံ)တွင်ထိုင်ခိုင်းပြီးတတ်နိုင်သလောက်ပစ္စည်းဖြင့်ကန်တော့ပါ ၊မိဘများမှလည်းဆုပေးချီးမြှင့်ပေးပါ ၊၊
ကန်တော့ချိန်မှာသားသမီးပြောရမည့်စကားမိဘများမွေးဖွားသန့်စင်ပြီးသည်မှစပြီး ယနေ့မိဘခြေရာမတောင်းယူမီအထိ ကံသုံးပါးဖြင့်မတော်တဆ ပြစ်မှားမိခဲ့ပါက ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ၊မသိမမြင်ရသောဘဝများမှအပြစ်များပါမကျန် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ၃ခါပြောပါ~~~~
မိဘများမှ ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဟု ၃ကြိမ်ပြန်ပြောပေးပါ၊မိဘခြေရာစယူလျှင်မိဘခြေများကို ရေဇလုံတစ်ခုမှာ ရေဆေးသန့်စင်ပြီး နံ့သာ တစ်ခုခု လိမ်းပေးပါ (သနပ်ခါးလည်းရ) ၊လိမ်းထားသောနံ့သာကို ခြောက်သွေ့စေရန်ယပ်တောင်ဖြင့် ယပ်ခပ်ပေးပါ၊ပြီးလျှင် မုန်ညှင်း ဆီ ၊နှမ်းဆီ၊ နနွင်းရောနယ်ထားသည်ကို ခြေဖဝါးအား သုတ်လိမ်းပေးပါ ၊
ပြီးနောက် ပိတ်ဖြူစပေါ်သို့အမေဆို ဘယ်ခြေစညာခြေနောက်လိုက်ပြီးနင်းပါအဖေဆိုညာခြေစဘယ်နောက်လိုက်ကာနင်းပေးပါမိဘများ ပိတ်ဖြူစပေါ် နင်းပြီးလျှင် မက်တက်ရပ်ကာ သရဏဂုံ တည်နေပါ မိဘများသရဏဂုံ တည်နေစဉ်သားသ္မီးမှ မိဘခြေအစုံကို ဦးခေါင်းဖြင့်ထိ၍ ပူဇော်ကန်တော့နေပါ ၊
ထိုစဉ် ဘေးမှ သူတစ်ယောက်မှ မိဘကို ဒီလို (၃ကြိမ်)မေးပေးရပါမယ်သားသ္မီးများအတွက် မိဘမေတ္တာတရားများ ဤခြေရာတွင်ထားခဲ့ပေးပါ ၊ ထားခဲ့ပါသလား)၃ကြိမ်မိဘများမှလည်း (ထားခဲ့ပါတယ်)ဟု ၃ကြိမ်ဖြေပေးရပါမယ်တစ်ခါမေးတစ်ခါဖြေလုပ်ပါ
ပြီးနောက်မိဘခြေများကို မူလရေဇလုံအတွင်းမှာပဲ ပြန်ဆေးပြီး နံ့ သာလိမ်းပေးပါ မိဘခြေဆေးထားသောရေဇလုံအတွင်းသို့သား ဆို ညာလက်သ္မီး ဆိုဘယ် လက် ထည့်ပြီး မိဘတို့အပေါ် ကာ ယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်မတော် တဆပြစ်မှားမိခဲ့ပါက ကျေပါစေ ဟုဆုတောင်းပြီး ထိုရေဖြင့် ဦးခေါင်းမျက်နှာ(၃ကြိမ်)ထိပါ၊ မျက်နှာ သစ်လျှင်လည်းရပါတယ် ၊
ပြီးနောက် ခြေရာယူတားသော ပိတ်ဖြူစပေါ်၌ ခြေရာယူသည့်နေ့စွဲ အမေ အဖေ တို့၏မွေးနေ့တို့အား အမှတ်တရရေးထိုးပါ ထိုခြေရာယူထားသော ပိတ်ဖြူစပေါ်မှ ခြေရာအားနှစ်ကာလကြာသော်လည်း မိဘခြေရာထင်ကျန်စေရန် ခြေရာဘေးမှအပ်ချဉ်၊ ဆော့ပင်တို့ဖြင့် ခြေရာအတိုင်းလိုက်ပေးပါ ။အပ်ချဉ်နဲ့လိုက်လည်းရပါတယ်”
ပြီးလျင် ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း ကန်တော့ပြီးအိပ်ရာဝင်ပါ။
မိဘခွရောယူနညျး ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတို့ရဲ့ ရိုးရာဓလဖွေ့ဈတဲ့ မိဘခွရောယူ နညျး
သိတဲ့သူတှရှေိသလို မသျိတဲ့သူတှလေညျးရှိပါတယျ ၊သိတဲ့ သူတှကေလညျး စနဈတကြ ဘယျလိုတှယေူ တယျဆိုတာ သိသူနညျးပါတယျ ၊ မိဘခွရော ဘယျလို ယူယူ ရတယျဆိုပမေယျ့ မိဘရော သားသ်မီးရောလုပျထုံးလုပျနညျးအတိုငျးယူတော့ပိုကောငျးတာပေါ့ဗြာ၊
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောဖတျပွီး ကိုယျတိုငျလုပျဖူးတဲ့ကြေးဇူးတျောရှငျ မငျးကှနျးဆရာတျောဘုရားကွီးနငျ့ကုနျလုံဆရာတျောကွီးတို့ရဲ့ မိဘခွရောယူနညျးလေးကိုမှတျမိသလောကျပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျလိုအပျသောပစ်စညျးမြား မုနျညှငျးဆီ ၊နှမျးဆီ၊နနှငျးဆေးသားစှဲထငျစမွေညျ့ပိတျဖွူစ၊မုနျညှငျးဆီနှမျးဆီ နနှငျးသုံးမြိုးကိုရောမှပေေးပါ
မိဘခွရောယူမညျ့နေ့ ဘယျနယေူ့ယူ မိဘခွရောကတော့ရတယျဆိုပမေယျ ဆရာတျောကွီးမြားကတော့ ဗုဒ်ဓဘာသာ၏နကွေီ့းနမွေ့တျ ဥပမာသတငျးကြှတျလပွညျ့ ၊တနျဆောငျတိုငျလပွညျ့စသညျ)ကိုယျ့ မှေးနစေ့သညျ့နမြေ့ားတှငျယူပါက ပိုကောငျးပါတယျလို့ပွောထားပါတယျ ၊၊
ယူနညျး ခွရောမယူမီမိဘ သားသ်မီးရခြေိုးသနျ့စငျကာသနျ့ရှငျးသောအဝတျမြားဝတျဆငျပွီးဘုရားစငျရှထေို့ငျပါခွရောမယူမီ ဘုရားစငျ ရှတှေ့ငျ ငါးပါးသီလခံယူပွီးဘုရားရှိခိုးပါ ၊ ပွီးလြှငျ မိဘကို မွငျ့သောမွတျသောနရော (ထိုငျခုံ)တှငျထိုငျခိုငျးပွီးတတျနိုငျသလောကျပစ်စညျးဖွငျ့ကနျတော့ပါ ၊မိဘမြားမှလညျးဆုပေးခြီးမွှငျ့ပေးပါ ၊၊
ကနျတော့ခြိနျမှာသားသမီးပွောရမညျ့စကားမိဘမြားမှေးဖှားသနျ့စငျပွီးသညျမှစပွီး ယနမေိ့ဘခွရောမတောငျးယူမီအထိ ကံသုံးပါးဖွငျ့မတျောတဆ ပွဈမှားမိခဲ့ပါက ခှငျ့လှတျပေးပါ ၊မသိမမွငျရသောဘဝမြားမှအပွဈမြားပါမကနျြ ခှငျ့လှတျပေးပါ ၃ခါပွောပါ~~~~
မိဘမြားမှ ခှငျ့လှတျပါတယျဟု ၃ကွိမျပွနျပွောပေးပါ၊မိဘခွရောစယူလြှငျမိဘခွမြေားကို ရဇေလုံတဈခုမှာ ရဆေေးသနျ့စငျပွီး နံ့သာ တဈခုခု လိမျးပေးပါ (သနပျခါးလညျးရ) ၊လိမျးထားသောနံ့သာကို ခွောကျသှစေ့ရေနျယပျတောငျဖွငျ့ ယပျခပျပေးပါ၊ပွီးလြှငျ မုနျညှငျး ဆီ ၊နှမျးဆီ၊ နနှငျးရောနယျထားသညျကို ခွဖေဝါးအား သုတျလိမျးပေးပါ ၊
ပွီးနောကျ ပိတျဖွူစပျေါသို့အမဆေို ဘယျခွစေညာခွနေောကျလိုကျပွီးနငျးပါအဖဆေိုညာခွစေဘယျနောကျလိုကျကာနငျးပေးပါမိဘမြား ပိတျဖွူစပျေါ နငျးပွီးလြှငျ မကျတကျရပျကာ သရဏဂုံ တညျနပေါ မိဘမြားသရဏဂုံ တညျနစေဉျသားသ်မီးမှ မိဘခွအေစုံကို ဦးခေါငျးဖွငျ့ထိ၍ ပူဇျောကနျတော့နပေါ ၊
ထိုစဉျ ဘေးမှ သူတဈယောကျမှ မိဘကို ဒီလို (၃ကွိမျ)မေးပေးရပါမယျသားသ်မီးမြားအတှကျ မိဘမတ်ေတာတရားမြား ဤခွရောတှငျထားခဲ့ပေးပါ ၊ ထားခဲ့ပါသလား)၃ကွိမျမိဘမြားမှလညျး (ထားခဲ့ပါတယျ)ဟု ၃ကွိမျဖွပေေးရပါမယျတဈခါမေးတဈခါဖွလေုပျပါ
ပွီးနောကျမိဘခွမြေားကို မူလရဇေလုံအတှငျးမှာပဲ ပွနျဆေးပွီး နံ့ သာလိမျးပေးပါ မိဘခွဆေေးထားသောရဇေလုံအတှငျးသို့သား ဆို ညာလကျသ်မီး ဆိုဘယျ လကျ ထညျ့ပွီး မိဘတို့အပျေါ ကာ ယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖွငျ့မတျော တဆပွဈမှားမိခဲ့ပါက ကပြေါစေ ဟုဆုတောငျးပွီး ထိုရဖွေငျ့ ဦးခေါငျးမကျြနှာ(၃ကွိမျ)ထိပါ၊ မကျြနှာ သဈလြှငျလညျးရပါတယျ ၊
ပွီးနောကျ ခွရောယူတားသော ပိတျဖွူစပျေါ၌ ခွရောယူသညျ့နစှေဲ့ အမေ အဖေ တို့၏မှေးနတေို့အား အမှတျတရရေးထိုးပါ ထိုခွရောယူထားသော ပိတျဖွူစပျေါမှ ခွရောအားနှဈကာလကွာသျောလညျး မိဘခွရောထငျကနျြစရေနျ ခွရောဘေးမှအပျခဉျြ၊ ဆော့ပငျတို့ဖွငျ့ ခွရောအတိုငျးလိုကျပေးပါ ။အပျခဉျြနဲ့လိုကျလညျးရပါတယျ”
ပွီးလငျြ ညအိပျရာဝငျတိုငျး ကနျတော့ပွီးအိပျရာဝငျပါ။
“ဘုရားစတေီထဲမှာ တနျဖိုးကွီးလကျဝတျလကျစားတှေ ထညျ့သှငျးလှူဒါနျးကွတဲ့ အကွောငျးအရငျး”
ဘုရားထဲမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေ ဘာလို့ ထည့်သွင်းထားတာတုန်း။ တစ်ချို့လည်းပဲ စဉ်းစားချင်မှ စဉ်းစားမှာ။
ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာတယ်။ ဌာပနာဆိုတာ…ထည့်သွင်းတာ၊ ထည့်သွင်းခြင်း တည်ထားခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
အဲဒီတော့ ရတနာတွေ ဘာကိစ္စ ဘုရားထဲမှာ ထည့်ကြတာတုန်း။ နိုင်ငံခြားသားတွေ အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ ဒါဟာ အကျိုးမရှိဘူးလို့ ပြောမှာပေါ့နော်။
ဒါတွေထည့်လိုက်လို့ဘာ အကျိုးရှိမှာတုန်း။ဘုရားရုပ်ပွား ဆင်းတု တော် ထည့်တာတော့ထားပါတော့။ ရတနာတွေ ထည့်တယ်။ အခုခေတ်လည်း ထည့်တာပဲ။
ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကိုယ့်သဒ္ဓါတရားနဲ့ ကိုယ်ထည့်ကြတယ်။ ဘာအတွက် ထည့်တာလဲဆိုတော့ ကြည်ညိုလို့ လှူတာပဲ သိတယ်။
သို့သော်…တကယ့်အစစ်အမှန်က ရည်ရွယ်ချက် ရှိတယ်။ မြတ်စွာ ဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါ ဘုရားရဲ့ ဓာတ်တော်တွေကို ရှစ်ပြည် ထောင်မင်းတွေကို ခွဲဝေပြီး ပေးလိုက်တယ်။
ဓာတ်တော်တွေက ရှစ်ပြည်ထောင်တောင်ရောက်သွားတယ်။ဒီဓာတ် တော်တွေကို အန္တရာယ်ဖြစ်မှာ စိုးလို့ အရှင်မဟာကဿပ တို့
က အဇာတသတ်မ င်းနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ဓာတ်တော်တိုက်ကြီး တစ်ခုလုပ်ပြီး ဓာတ်တော်တွေ စုထည့်ထားတယ်တဲ့။
အဲဒီလို စုထည့်ထားပြီး အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပတ္တမြား တစ်လုံးကို အဲဒီထဲမှာ ထည့်ထားပြီး စာရေးထားတယ်။
နောင်တစ်ချိန်ကျရင်… ဒီဓာတ်တော်တိုက်ကြီး ပျက်စီးသွားရင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ငွေကြေး မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီပတ္တမြားတုံးကြီးကို ရောင်းချပြီး ပြုပြင်ပါတဲ့။
အဲဒီတော့ ရတနာတွေ ထည့်သွင်းထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ… သင်္ခါရသဘောတရားအရ တစ်နေ့ကျ ပျက်မှာပဲ။
maintenance လိုတယ်လေ။ maintenance အတွက် ထည့်ခဲ့တာ။ ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းတယ်ပေါ့။
maintenance အတွက် deposit လုပ်ထားခဲ့တာ။ ဒါတွေကိုယူပြီး ဘုရားပြင်ရမယ်ပေါ့။ အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်ပဲ။
နောက်ပိုင်းကျတော့… ဒီရည်ရွယ်ချက်က တဖြည်းဖြည်း ပျောက်လာတဲ့ သဘောပဲ။
မြန်မာပြည်မှာ…ကုသိုလ်ရှင်တွေ ဆိုင်းဘုတ် ထိုးလေ့ ရှိကြတယ်လေ။ ဘုရားတံတိုင်းတို့ ဘာတို့ ညာတို့ အကုန်လုံးပေါ့။
ကုသိုလ်ရှင်တွေ ဘာလို့ ထိုးတာတုန်း-? နာမည် ကြော်ငြာတာလား။ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။
ကိုယ့်ကို လူသိစေချင်လို့ ထိုးတာလား။ မသိလည်း ဘာဖြစ်လဲ-? လှူတာက လှူတာပဲပေါ့။
အဲဒီတော့ ဆိုင်းဘုတ်ထိုးခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုရင် အမျှဝေတဲ့သဘော၊ မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က သာဓုခေါ်ရအောင်လို့။
ဒါ့ကြောင့်မို့…ရှေးတုန်းက မိသားစုကောင်းမှုဆိုတာရဲ့ နောက်မှာ… နတ်လူ သာဓုခေါ်စေသော် ဆိုတာလေး ပါတယ်။
အခုခေတ်ကတော့…အဲဒီ နတ်လူသာဓု ခေါ်စေသော်ဆိုတာလေးပျောက်သွားပြီး နာမည်ကြော်ငြာတာ ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါက ပြောင်းလဲလာတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ မူရင်းအဓိပ္ပါယ် ပျောက်သွားပြီးတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ သဘောဟာ ဒီလိုပဲ ရှိတယ်ပေ့ါ။
စပြီးလုပ်တဲ့ အချိန်ကတော့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။ အဲဒီအဓိပ္ပါယ်ရှိတာတွေဟာ နောက်ပိုင်း အဓိပ္ပါယ် မသိတော့ဘူး။
ဘုရားထဲမှာ တနျဖိုးရှိတဲ့ အရာတှေ ဘာလို့ ထညျ့သှငျးထားတာတုနျး။ တဈခြို့လညျးပဲ စဉျးစားခငျြမှ စဉျးစားမှာ။
ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာတယျ။ ဌာပနာဆိုတာ…ထညျ့သှငျးတာ၊ ထညျ့သှငျးခွငျး တညျထားခွငျးလို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။
အဲဒီတော့ ရတနာတှေ ဘာကိစ်စ ဘုရားထဲမှာ ထညျ့ကွတာတုနျး။ နိုငျငံခွားသားတှေ အမွငျနဲ့ကွညျ့ရငျတော့ ဒါဟာ အကြိုးမရှိဘူးလို့ ပွောမှာပေါ့နျော။
ဒါတှထေညျ့လိုကျလို့ဘာ အကြိုးရှိမှာတုနျး။ဘုရားရုပျပှား ဆငျးတု တျော ထညျ့တာတော့ထားပါတော့။ ရတနာတှေ ထညျ့တယျ။ အခုခတျေလညျး ထညျ့တာပဲ။
ကွညျညိုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှကေ ကိုယျ့သဒ်ဓါတရားနဲ့ ကိုယျထညျ့ကွတယျ။ ဘာအတှကျ ထညျ့တာလဲဆိုတော့ ကွညျညိုလို့ လှူတာပဲ သိတယျ။
သို့သျော…တကယျ့အစဈအမှနျက ရညျရှယျခကျြ ရှိတယျ။ မွတျစှာ ဘုရား ပရိနိဗ်ဗာနျစံတဲ့အခါ ဘုရားရဲ့ ဓာတျတျောတှကေို ရှဈပွညျ ထောငျမငျးတှကေို ခှဲဝပွေီး ပေးလိုကျတယျ။
ဓာတျတျောတှကေ ရှဈပွညျထောငျတောငျရောကျသှားတယျ။ဒီဓာတျ တျောတှကေို အန်တရာယျဖွဈမှာ စိုးလို့
အရှငျမဟာကဿပ တို့ က အဇာတသတျမ ငျးနဲ့ တိုငျပငျပွီးတော့ဓာတျတျောတိုကျကွီး တဈခုလုပျပွီး ဓာတျတျောတှေ စုထညျ့ထားတယျတဲ့။
အဲဒီလို စုထညျ့ထားပွီး အငျမတနျ တနျဖိုးရှိတဲ့ ပတ်တမွား တဈလုံးကို အဲဒီထဲမှာ ထညျ့ထားပွီး စာရေးထားတယျ။
နောငျတဈခြိနျကရြငျ… ဒီဓာတျတျောတိုကျကွီး ပကျြစီးသှားရငျပွငျဆငျဖို့အတှကျ ငှကွေေး မတတျနိုငျဘူးဆိုရငျ ဒီပတ်တမွားတုံးကွီးကို ရောငျးခပြွီး ပွုပွငျပါတဲ့။
အဲဒီတော့ ရတနာတှေ ထညျ့သှငျးထားခဲ့တယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျဟာ… သင်ျခါရသဘောတရားအရ တဈနကြေ့ ပကျြမှာပဲ။
maintenance လိုတယျလေ။ maintenance အတှကျ ထညျ့ခဲ့တာ။ ဒီလိုဆိုလို့ရှိရငျတော့ ရညျရှယျခကျြ ကောငျးတယျပေါ့။
maintenance အတှကျ deposit လုပျထားခဲ့တာ။ ဒါတှကေိုယူပွီး ဘုရားပွငျရမယျပေါ့။ အဲဒီ ရညျရှယျခကျြပဲ။
နောကျပိုငျးကတြော့… ဒီရညျရှယျခကျြက တဖွညျးဖွညျး ပြောကျလာတဲ့ သဘောပဲ။
မွနျမာပွညျမှာ…ကုသိုလျရှငျတှေ ဆိုငျးဘုတျ ထိုးလေ့ ရှိကွတယျလေ။ ဘုရားတံတိုင်းတို့ ဘာတို့ ညာတို့ အကုနျလုံးပေါ့။
ကုသိုလျရှငျတှေ ဘာလို့ ထိုးတာတုနျး-? နာမညျ ကွျောငွာတာလား။ ရညျရှယျခကျြက ဘာလဲ။
ကိုယျ့ကို လူသိစခေငျြလို့ ထိုးတာလား။ မသိလညျး ဘာဖွဈလဲ-? လှူတာက လှူတာပဲပေါ့။
အဲဒီတော့ ဆိုငျးဘုတျထိုးခွငျးရဲ့ ရညျရှယျခကျြက ဘာလဲဆိုရငျ အမြှဝတေဲ့သဘော၊ မွငျတဲ့ပုဂ်ဂိုလျက သာဓုချေါရအောငျလို့။
ဒါ့ကွောငျ့မို့…ရှေးတုနျးက မိသားစုကောငျးမှုဆိုတာရဲ့ နောကျမှာ… နတျလူ သာဓုချေါစသေျော ဆိုတာလေး ပါတယျ။
အခုခတျေကတော့…အဲဒီ နတျလူသာဓု ချေါစသေျောဆိုတာလေးပြောကျသှားပွီး နာမညျကွျောငွာတာ ဖွဈသှားတယျ။
ဒါက ပွောငျးလဲလာတဲ့ သဘောပေါ့နျော။ မူရငျးအဓိပ်ပါယျ ပြောကျသှားပွီးတော့ ပွောငျးလဲလာတဲ့ သဘောဟာ ဒီလိုပဲ ရှိတယျပေ့ါ။
စပွီးလုပျတဲ့ အခြိနျကတော့ အဓိပ်ပါယျရှိတယျ။ အဲဒီအဓိပ်ပါယျရှိတာတှဟော နောကျပိုငျး အဓိပ်ပါယျ မသိတော့ဘူး။
“မွငျးခှာရှကျ၏ ရောဂါ အလိုကျ ဆေး နညျး မြား”
အ ပူ လောင် နာ
မြင်းခွာရွက်ကို ကြိတ် ပြီး ရ လာ သော အ ဖတ် နဲ့ အ ရည် ကို ပျား ရည် နဲ့ ရော ပါ ၊ အ ရည် ရွဲ ရွဲ စိမ်း ဝါ ရောင် လေး ရ ပါ လိမ့် မယ် ၊ ရ လာ တဲ့ ဆေး ရည် ကို မီး လောင် ဒဏ် ရာ ( သို့) အ ပူ လောင် ဒဏ် ရာ တို့ တွင် လိမ်း ပေး ပါ က အ နာ ကျက် မြန် စေ ပါ သည် ။
ခန္ဓာ ကိုယ် ရဲ့ သွေး လှည့် ပတ် မှု မ ကောင်း တဲ့ အ ခါ ခြေ ထောက် တွေ ဖောယာင်လာတတ်ပါတယ် ၊ မြင်း ခွာ ရွက် ကို ရေ ၃ ခွက် ၁ ခွက် ပြုတ် ပြီး ရ လာ သော ဆေး ရည် ကို တစ် နေ့ ၃ ကြိမ် သောက် ပေး ခြင်း ဖြင့် သွေး လှည့် ပတ် မှု ကို ကောင်း မွန် စေ ပြီး အ ဖော ကျ စေ ပါ သည် ။
ဓါတ် ရောင် ခြည် လောင် ခြင်း
ဓါတ် ရောင် ခြည် ကု သ မှု ခံ ရ တဲ့ အ ခါ အ ရေ ပြား နီ ရဲ ခြင်း / စပ် ဖြိန်း ဖြိန်း ဖြစ် ခြင်း စ သည် တို့ ကို ခံ စား ရ တတ် ပါ တယ် ၊ မြင်း ခွာ ရွက် ကို ကြိတ် ပြီး ရ လာ တဲ့ သ တ္တု ရည် ကို လိမ်း ပေး ခြင်း ဖြင့် အ ရေ ပြား နီ ရဲ ခြင်း နှင့် စပ် ဖြိန်း ဖြိန်း ဖြစ် ခြင်း တို့ ကို သက် သာ စေ ပါ သည် ။
အ သား ပြတ် ခြင်း
ကိုယ် ဝန် ဆောင် များ / အ ဝ လွန် သူ များ တွင် အ သား ပြတ် ခြင်း ဖြစ် တတ် ပါ တယ် ၊ မြင်း ခွာ ရွက် သ တ္တု ရည် / သံ ပု ရာ ရည် နှင့် ပျား ရည် တို့ ကို ဆတူရောပြီး နေ့ စဉ် လိမ်းပေးခြင်း ဖြင့် အ သား အ ရေ ကို ညီ ညာ လာ စေ ပါ သည် ။
အ အေး မိ ခြင်း
မြင်း ခွာ ရွက် ကို ရေ သုံး ဆ ထည့် ပြီး ၃ ခွက် ၁ ခွက် ကျန် အောင် ပြုတ် ပါ ၊ ရ လာ သော မြင်း ခွာ ရွက် ပြုတ် ရည် ကို သောက် သုံး ပေး ခြင်း ဖြင့် အ အေး မိ ခြင်း / နှာ စေး ခြင်း နှင့် ဝမ်း ပျက် ဝမ်း လျှော ခြင်း တို့ ကို သက် သာ စေ ပါ သည် ။
စိတ် ဖိ စီး ခြင်း
မြင်း ခွာ ရွက် ပြုတ် ရည် ကို သောက် သုံး ပေး ခြင်း ဖြင့် စိုး ရိမ် သော က များ ခြင်း ၊ စိတ် ဖိ စီး ခြင်း တို့ ကို သက် သာ စေ သည့် အ ပြင် သွေး လှည့် ပတ် မှု ကို ကောင်း မွန် စေ ပြီး နှ လုံး ကို အား ကောင်း စေ ပါ သည် ။
အိပ် မ ပျော် ခြင်း
မြင်း ခွာ ရွက် ပြုတ် ရည် ကို တစ် နေ့ ၃ ကြိမ် သောက် သုံး ပေး ခြင်း ဖြင့် အိပ် ချင် စိတ် ကို ဖြစ် ပေါ် စေ ပါ သည် ။
အ ဆစ် ရောင် ခြင်း
မြင်း ခွာ ရွက် ၊ ဂျင်း တို့ ကို ပြုတ် ပြီး ရ လာ သော ဆေး ပြုတ် ရည် ကို တစ် နေ့ ၃ ကြိမ် သောက် သုံး ပေး ခြင်း ဖြင့် အ ဆစ် ရောင် ခြင်း ၊ နာ ခြင်း တို့ ကို သက် သာ စေ ပါ သည် ။
အာ ရုံ ကြော အား နည်း ခြင်း
မြင်း ခွာ ရွက် ပြုတ် ရည် ကို တစ် နေ့ ၃ ကြိမ် သောက် သုံး ပေး ခြင်း ဖြင့် အာ ရုံ ကြော အား ကောင်း စေ ပြီး အ မြင် မှုန် ခြင်း ၊ ဝေ ဝါး ခြင်း တို့ ကို သက် သာ စေ ပါ သည် ။
အ ပူ လောငျ နာ
မွငျးခှာရှကျကို ကွိတျ ပွီး ရ လာ သော အ ဖတျ နဲ့ အ ရညျ ကို ပြား ရညျ နဲ့ ရော ပါ ၊ အ ရညျ ရှဲ ရှဲ စိမျး ဝါ ရောငျ လေး ရ ပါ လိမျ့ မယျ ၊ ရ လာ တဲ့ ဆေး ရညျ ကို မီး လောငျ ဒဏျ ရာ ( သို့) အ ပူ လောငျ ဒဏျ ရာ တို့ တှငျ လိမျး ပေး ပါ က အ နာ ကကျြ မွနျ စေ ပါ သညျ ။
ခန်ဓာ ကိုယျ ရဲ့ သှေး လှညျ့ ပတျ မှု မ ကောငျး တဲ့ အ ခါ ခွေ ထောကျ တှေ ဖောယာငျလာတတျပါတယျ ၊ မွငျး ခှာ ရှကျ ကို ရေ ၃ ခှကျ ၁ ခှကျ ပွုတျ ပွီး ရ လာ သော ဆေး ရညျ ကို တဈ နေ့ ၃ ကွိမျ သောကျ ပေး ခွငျး ဖွငျ့ သှေး လှညျ့ ပတျ မှု ကို ကောငျး မှနျ စေ ပွီး အ ဖော ကြ စေ ပါ သညျ ။
ဓါတျ ရောငျ ခွညျ လောငျ ခွငျး
ဓါတျ ရောငျ ခွညျ ကု သ မှု ခံ ရ တဲ့ အ ခါ အ ရေ ပွား နီ ရဲ ခွငျး / စပျ ဖွိနျး ဖွိနျး ဖွဈ ခွငျး စ သညျ တို့ ကို ခံ စား ရ တတျ ပါ တယျ ၊ မွငျး ခှာ ရှကျ ကို ကွိတျ ပွီး ရ လာ တဲ့ သ တ်တု ရညျ ကို လိမျး ပေး ခွငျး ဖွငျ့ အ ရေ ပွား နီ ရဲ ခွငျး နှငျ့ စပျ ဖွိနျး ဖွိနျး ဖွဈ ခွငျး တို့ ကို သကျ သာ စေ ပါ သညျ ။
အ သား ပွတျ ခွငျး
ကိုယျ ဝနျ ဆောငျ မြား / အ ဝ လှနျ သူ မြား တှငျ အ သား ပွတျ ခွငျး ဖွဈ တတျ ပါ တယျ ၊ မွငျး ခှာ ရှကျ သ တ်တု ရညျ / သံ ပု ရာ ရညျ နှငျ့ ပြား ရညျ တို့ ကို ဆတူရောပွီး နေ့ စဉျ လိမျးပေးခွငျး ဖွငျ့ အ သား အ ရေ ကို ညီ ညာ လာ စေ ပါ သညျ ။
အ အေး မိ ခွငျး
မွငျး ခှာ ရှကျ ကို ရေ သုံး ဆ ထညျ့ ပွီး ၃ ခှကျ ၁ ခှကျ ကနျြ အောငျ ပွုတျ ပါ ၊ ရ လာ သော မွငျး ခှာ ရှကျ ပွုတျ ရညျ ကို သောကျ သုံး ပေး ခွငျး ဖွငျ့ အ အေး မိ ခွငျး / နှာ စေး ခွငျး နှငျ့ ဝမျး ပကျြ ဝမျး လြှော ခွငျး တို့ ကို သကျ သာ စေ ပါ သညျ ။
စိတျ ဖိ စီး ခွငျး
မွငျး ခှာ ရှကျ ပွုတျ ရညျ ကို သောကျ သုံး ပေး ခွငျး ဖွငျ့ စိုး ရိမျ သော က မြား ခွငျး ၊ စိတျ ဖိ စီး ခွငျး တို့ ကို သကျ သာ စေ သညျ့ အ ပွငျ သှေး လှညျ့ ပတျ မှု ကို ကောငျး မှနျ စေ ပွီး နှ လုံး ကို အား ကောငျး စေ ပါ သညျ ။
အိပျ မ ပြျော ခွငျး
မွငျး ခှာ ရှကျ ပွုတျ ရညျ ကို တဈ နေ့ ၃ ကွိမျ သောကျ သုံး ပေး ခွငျး ဖွငျ့ အိပျ ခငျြ စိတျ ကို ဖွဈ ပျေါ စေ ပါ သညျ ။
အ ဆဈ ရောငျ ခွငျး
မွငျး ခှာ ရှကျ ၊ ဂငျြး တို့ ကို ပွုတျ ပွီး ရ လာ သော ဆေး ပွုတျ ရညျ ကို တဈ နေ့ ၃ ကွိမျ သောကျ သုံး ပေး ခွငျး ဖွငျ့ အ ဆဈ ရောငျ ခွငျး ၊ နာ ခွငျး တို့ ကို သကျ သာ စေ ပါ သညျ ။
အာ ရုံ ကွော အား နညျး ခွငျး
မွငျး ခှာ ရှကျ ပွုတျ ရညျ ကို တဈ နေ့ ၃ ကွိမျ သောကျ သုံး ပေး ခွငျး ဖွငျ့ အာ ရုံ ကွော အား ကောငျး စေ ပွီး အ မွငျ မှုနျ ခွငျး ၊ ဝေ ဝါး ခွငျး တို့ ကို သကျ သာ စေ ပါ သညျ ။
“တရားအလုပျဆိုတာ သိတဲ့အခြိနျက စလုပျ နောကျမကပြါဖူး”
သိတဲ့အချိန်က စလုပ် နောက်မကျပါဖူး
ဟိုတုန်းက မသိဘူး အခုမှ သိရတာ …
ဘယ်တော့မှ မတွေးပါနဲ့ …
သိတဲ့အချိန်က စလုပ် …
သိလျက်သားနဲ့ မလုပ်ဖူး ဆိုရင်သာ
#ဆရာတော်_အရှင်_ဆန္ဒာဓိက ( ရွှေပါရမီတောရ )
📌 အမှောင်ပျောက်၍ အလင်းရောက်ပါစေ။📌
Credit , Original Uploader
သိတဲ့အခြိနျက စလုပျ နောကျမကပြါဖူး
ဟိုတုနျးက မသိဘူး အခုမှ သိရတာ …
ဘယျတော့မှ မတှေးပါနဲ့ …
သိတဲ့အခြိနျက စလုပျ …
သိလကျြသားနဲ့ မလုပျဖူး ဆိုရငျသာ
#ဆရာတျော_အရှငျ_ဆန်ဒာဓိက ( ရှပေါရမီတောရ )
📌 အမှောငျပြောကျ၍ အလငျးရောကျပါစေ။📌
“သစ်စာရှစေညျဆရာတျောကွီး ဟောကွားတျောမူသညျ့ မွအေိုးပမာ ဤခန်ဓာ”
” မြေအိုးပမာ ဤခန္ဓာ ”
ကြာကြာခံမယ်လို့ အာမခံ မပေးဘူး၊
ခိုင်ခံ့မယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ မရဘူး။
ဒီခန္ဓာကြီးဟာ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥတို့လို
ကံကုန်လို့ သေတဲ့သူ ရှိတယ်၊
” မွအေိုးပမာ ဤခန်ဓာ ”
ကွာကွာခံမယျလို့ အာမခံ မပေးဘူး၊
ခိုငျခံ့မယျလို့ သတျမှတျလို့ မရဘူး။
ဒီခန်ဓာကွီးဟာ ကွကျဥ၊ ဘဲဥတို့လို
ကံကုနျလို့ သတေဲ့သူ ရှိတယျ၊